Magento vs osCommerce vs Isbarbardhiga OpenCart
Talaado, Febraayo 26, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Iibsiga ecommerce ee dunidu wuxuu kusii kordhayaa 19% sanadkii mana ka gaabiyo goor dhaw. Tani infographic laga soo qaatay Forix Web Design wuxuu isbarbardhigayaa seddex ka mid ah aaladaha hormoodka u ah - Magento, osCommerce iyo OpenCart, si looga caawiyo dadka isticmaala inay doortaan nooca ecommerce ee ugu fiican kan meheradooda wax iibsiga.
Saddexda barnaamijyadan waxay ka awood badan yihiin 30% suuqa. In kasta oo ay jiraan fursado badan oo intaa ka badan, ka faa'iidaysiga barxad ganacsi oo si wanaagsan loo qaatay oo leh horumar ballaadhan iyo taageero bulshada ayaa ku siin kara cidhifka aad u baahan tahay. Iyagu waa kuwa ugu dhaqsaha badan qaadashada xeelado cusub - haddii ay tahay jajabka hodanka ah or isticmaalka mobilada.
Tags: ecommerceisbarbardhiga ecommercemagentomagento vs gaari furanmagento vs oscommercefur furanoscommerceoscommerce vs furan
Sababta oo ah Google ayaa yidhi So
May 23, 2013 at 2: 51 AM
Hey Douglas, tani waa isbarbardhig weyn. Waxa aanan fahmin waa "X" @ "Magento -> Statistics". Xitaa daabacaadda CE waxay bixisaa warbixino fara badan, sida gawaarida laga tagay, iibiyaasha, macaamiisha ugu sareysa iyo wixii la mid ah.
May 23, 2013 at 10: 27 AM
Waa qodob fiican, @ google-65b2531b86017a5e6a499632b90ed9ce: disqus. Ma hubo in aan jeclaan lahaa X'd, sidoo kale. Waxaa laga yaabaa inay ahayd uun marka la barbar dhigo gawaadhida kale.
May 24, 2013 at 4: 41 AM
osCommerce waa taariikh, Magento wuxuu xukumaa dukaamada waaweyn. OpenCart iyo PrestaShop ayaa u fiican kuwa yaryar. Waxaan si adag ugula taliyay dhamaan macaamiishayda inay ka haajiraan osCommerce una wareegaan Magento, Presta ama OpenCart. Haddii aad ku jirto osCommerce - horay u soco
Software Transpacific Pvt. Ltd
Jun 24, 2013 at 12: 18 PM
"Magento wuxuu ku fiican yahay bogagga waaweyn" iyo "Opencart wuxuu ku fiican yahay
yar ”RUN MA AHA
Tan waxaan ku aqriyay
daraasiin maqaallo ah iyo qoraallo qoraal ah. Khibradeena ayaa lid ku ah.
baaxad weyn oo ah goobta ganacsiga ee 'Diamond' oo ku taal OpenCart iyo Magento. Oo la ogaaday "OpenCart" ayaa waxtar badan.
Magento wuxuu hayaa waxsoosaar badan oo server ah iyo in ka badan qiyaastii. 20,000
alaabada DB tusaya nuugista. Dukaamada iskood loo maamulo qalooca barashada dukaanka magento
milkiiluhu aad buu u dhaadheeraa .OpenCart kordhintu waa ka jaban tahay waana badan tahay.
Jan 27, 2014 at 8: 35 AM
Inbadan markaa 90% dadku way ogyihiin in magento korka yahay oo badiyaa dadka sidan oo kale ah. ka hartay 10% ma jecla sida macbudkeeda darteed. Laakiin wali way sii wanaajinayaan .. taasi waa sababta dadka inta hadhay ay sidoo kale uga guurayaan dhammaan meheradaha kale una guurayaan.
Oktoobar 6, 2014 at 9:48 AM
fyi nooca ugu dambeeya ee Opencart waa 2.0 maahan 3.0.2.
Apr 28, 2015 at 5: 45 AM
Isbarbardhig weyn. Shaki kuma jiro in Magento Ecommerce xalka uu runtii yahay midka ugu fiican halka oscommerce ay tahay mid hore oo xal ah. Dadku hadda waxay u gudbayaan xalalka cusub ee wax ku oolka ah.